सोसियल डिस्टान्स भन्ने भनाइ नै गलत लाग्छ | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
सोसियल डिस्टान्स भन्ने भनाइ नै गलत लाग्छ
६ आश्विन २०७७, मंगलवार ०९:०९
मेरो माइती झापा हो । घर चाहिं नुवाकोट । चरिकोटमा आएको १६ वर्ष भयो । म यहाँ ब्रेल लिपिमा पढ्ने विद्यार्थीहरू छन् भन्ने सुनेर जागिरको सिलसिलामा आएको हुँ । चरिकोटमा म र श्रीमान् सँगै बस्छौं । विद्यालयमा छात्रावास छ । त्यसैमा बस्छौं । मेरो श्रीमान् पनि म जस्तै दृष्टिविहीन नै हुनुहुन्छ ।
मेरो श्रीमान्‌लाई काठमाडौं आइजाइ गरिरहनुपर्ने भएकोले हामीले सजिलो हुन्छ भनेर काठमाडौंमा पनि कोठा लिएका थियौँ । चैत पहिलो हप्ता नै शैक्षिक सत्र सकिएकोले म फुर्सदिलो नै थिएँ त्यसैले हामी चैत ९ गते काठमाडौं आयौं । कोरोनाको कारण काठमाडौं आएको केही दिनमा नै लकडाउन सुरु भयो ।
काठमाडौं केही दिन बसेर फर्कने योजनामा आएकोमा २ महिना बसेर बल्लबल्ल दोलखा फर्कन पाइयो । त्यो पनि एक जना चिनेका एम्बुलेन्स चालकको सहयोगमा ।
त्यो बेला प्रायःजसो मान्छेहरू कि त पासको गाडी वा एम्बुलेन्समा मिलाएर हिड्ने गर्थें । हामीले पासको गाडी मिलाउने नसक्ने भएर मैले एक जना चिनेका एम्बुलेन्स चालकलाई हामी यहाँ काठमाडौंमा थुनिएको कुरा गरें त्यसपछि उनले हामीलाई काठमाडौंबाट एम्बुलेन्समा लगिदिए ।
तर कसैले उनले हामीलाई एम्बुलेन्समा बोकेको भनेर भन्दिएछ । त्यसपछि त उसलाई कारबाही गरेछन् । त्यो कुरा सुन्दा मलाई निकै दुःख लाग्यो । केही दिन थुनामा पनि परेछन् ती चालक । यो कुरा समाचारमा पनि आएछ । मलाई त्यो एम्बुलेन्सवालालाई समातेकोमा निकै दिनसम्म नराम्रो लागिरह्यो । उसले हाम्रो लागि त राम्रो गरिदिएको हो । नत्र काठमाडौंमा थुनिएर कहिलेसम्म बस्नुपर्ने थियो ।
अपाङ्गता क्षेत्रमा पनि अलि संवेदनशील अपाङ्गता भएका व्यक्ति हौं हामी। काठमाडौंबाट आएको केही दिनसम्म हामीलाई नछुने, छि छि दूरदूर गर्ने काम पनि भयो । नजिक नआउने, नजिकबाट कुरा नगर्ने भयो । मलाई त सरकारको नियम पनि गजबको लाग्छ । २ मिटर दूरी कायम गर्नु भन्छ । हामीलाई २ मिटर भनेको कति हो के थाहा । सोसियल डिस्टान्स भन्छ । यो सोसियल डिस्टान्स भन्ने भनाइ नै गलत लाग्छ मलाई । बरु यसलाई त फिजिकल डिस्टान्स (भौतिक दूरी) भन्न मिल्ला । यसलाई शारीरिक दूरी पनि भन्न मिल्ला । तर सामाजिक दूरी भन्न मिल्दैन । यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्छ । मानिस त सामाजिक प्राणी हो नि । समाजमै मिलेर बस्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक दूरी भन्न कसरी मिल्छ ?
काठमाडौंबाट चरिकोटमा आएपछि छात्रावासको मेडमलाई फोन गरें । प्रहरीले प्रधानाध्यापकलाई पनि फोन गरिदिए । त्यसपछि प्रधानाध्यापकले छात्रावासको मेडमलाई फोन गरिदिनुभएछ । अनि मात्र हामीलाई छात्रावासको गेट खुल्यो । त्यसपछि हामी गेटमा पनि गएनौं । टाढैबाट सामान लिने गर्यौं । हामी कतै निस्किएनौं । फोन गरेर, म्यासेज गरेर सामान मगाउँथ्यौं । गेटबाट सामान ल्याएपछि भित्र सरसफाइ गर्यौ । यसरी २१ दिन बितायौं ।
कोरोनाका कारण अहिले धेरैको पढाइ अनलाइनबाट भए पनि दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूको पढाइ त चौपट भएको छ । यहाँ १० जना दृष्टिविहीनको कोटा छ । यस वर्ष ८ जना अध्ययन गरिरहेका छन् । भर्खर पढाइ सुरु गर्नेदेखि ९ कक्षामा पढिरहेकाहरू छन् ।
उनीहरूलाई यहाँ बोलाएर पढाउन सक्ने अवस्था छैन । अनलाइन क्लासहरू उनीहरूका लागि उपयुक्त हुँदैनन् । अनलाइनबाट ब्रेल यस्तो हुन्छ यसरी गर्नुपर्छ भन्दा उनीहरूले बुझ्दैनन् । त्यसैले उनीहरूलाई दूरी कायम गरेर पढाउन सक्ने अवस्था हुन्न । सबैलाई छमाएरै पढाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी पढाउने ?
यो वर्षको त आधा शैक्षिक सत्र पनि सकिएको छ । यसले त उनीहरूको पढाइ बिग्रियो नि। त्यसैले सरकारले अब कसरी अगाडि लाने भन्नेबारेमा पनि सोच्न जरुरी छ । लामो समय घरमा बसेका कारण अब उनीहरूलाई पढाइमा ध्यान दिने बनाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारमा बस्दा उनीहरूको जीवनशैली नै फरक भइसक्यो ।
अहिले गाउँगाउँमा शिक्षकहरू गएर पढाउने काम भएको छ केही ठाउँमा । त्यस्ता ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका पनि यस्ता विपदहरूमा जुध्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । यही कोरोनाको कुरा गर्दा सरसफाइको कुरालाई सँगै लैजानुपर्‍यो । सामग्रीहरू अपाङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संरचना निर्माण गर्दा पनि यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रोत्साहन र अवसरको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ । सबैले प्रोत्साहन दिने र अवसर सिर्जना गर्ने हो भने हामी जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न सक्छौं ।
यो कथा कालिञ्चोक मावि, चरिकोटका दृष्टिविहीन शिक्षक यानीमाया भट्टराईसंग गरिएको कुराकानीमा रहेर हाम्रो साथी अर्जुन दाहालले लेख्नुभएको हो ।
कोरोनाको भन्दा पनि तलबको चिन्ताले सतायो
२३ कार्तिक २०७७, आईतवार ११:०५
हिँडेरै पुगुँला त रोल्पा ?
६ बैशाख २०७७, शनिबार १७:२०